1915 ARTS.KOFFIE.HUIS @ igumbi Arundati
UTito ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
1915 ARTS.KOFFIE. IHUIS sisakhiwo selifa (esakhiwa ngo-1915) singqongwe yigadi yasetropiki. Uya kuhlala nosapho oluncinci lomzobi wezakhiwo.
I-ARUNDATI ligumbi elipholileyo kumgangatho ophantsi, lineebhedi ezi-2 ukumkanikazi kunye nebhafu yangasese, kodwa akukho moya. ISalatiga inemozulu entle epholileyo. Siza kukwenzela umhlobo ngesidlo sakusasa sasekhaya. Unokuchitha ixesha lakho kwivenkile yethu yekofu okanye kwithala leencwadi. Ithala leencwadi linokusetyenziselwa iintlanganiso zamaqela amancinane. Sikwanayo ne-wifi elungileyo nesimahla
Konwabele ukuhlala kwakho ngebhedi eyi-queen e-1 etofotofo, uqhagamshelo lwe-intanethi olukhawulezayo kunye nendawo enkulu eqhelekileyo kunye ne-TV yencoko ye-chit okanye uphumle nje. Igumbi lokuhlambela libonisa ishawari engenamanzi ashushu, indlu yangasese kunye nezixhobo zokuhlambela.
- Asiyiyo ihotele, asinikezeli ngeenkonzo zehotele okanye i-24/7 yolwamkelo. Singabantu bokwenyani ku-Airbnb. :) Ukuba ufuna ukucoca imihla ngemihla, nceda usazise xa ungena
Unxibelelwano lwethu neendwendwe luxhomekeke kwiindwendwe zethu ezizimisele ukuba kunye nosapho lwethu olwandisiweyo lwasekuhlaleni kwaye ngokuqinisekileyo kuxhomekeke kubukho bethu, ishedyuli yokufumaneka.
kusasa unokonwabela isidlo sakusasa kwi-teras manis kunye negadi yethu. Isidlo sakusasa sasekhaya ngelixa ndimamele i-degung bali okanye i-keroncong kwithala leencwadi lethu lomculo.
Kananjalo unokufunda iincwadi ezininzi kwithala leencwadi lethu
Unxibelelwano lwethu neendwendwe luxhomekeke kwiindwendwe zethu ezizimisele ukuba kunye nosapho lwethu olwandisiweyo lwasekuhlaleni kwaye ngokuqinisekileyo kuxhomekeke kubukho beth…